အီဂျစ်သမ္မတ နှင့် ချားလ်စ်မင်းသားတို့ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဒေသတွင်း ပြဿနာများ ဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ မင်းသားချားလ်စ်နှင့် ၎င်း၏ကြင်ယာတော် ကမ်မီလာ တို့အား ဘုရင်မကြီး၏နှစ် ၉၀ပြည့် နှစ် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဝတ်ပြုခြင်းအပြီး စိန့်ပေါလ် ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်းမှ ပြန်လာသည်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုင်ရို၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီဂျစ်နိုင်ငံ သမ္မတ Abdel-Fattah al-Sisi နှင့် ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းသား ချားလ်စ် (Charles ) တို့သည် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစွန်းရောက်ဝါဒကို တိုက်ဖျက်ရန် နည်းလမ်းများကိုနိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အီဂျစ်သမ္မတ ဇနီးမောင်နှံသည် မင်းသား ချားလ်စ် နှင့် ကြင်ယာတော် နယ်စားကတော် Camilla တို့ကို Al-Ittihadiya နန်းတော်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
“အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘုံအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ အများအပြား ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သည်းခံခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ၏ အစွန်းရောက်လုပ်ဆောင်မှုများကို လျော့ပါးစေရေးဆိုင်ရာ အခြားသောနည်းလမ်းအား လက်ခံခြင်း တန်ဖိုးများ မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ပူးတွဲ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်အားထက်သန်မှုကို Sisi က အတည်ပြုခဲ့သည်။
အစွန်းရောက်အယူဝါဒများကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည့် နည်းလမ်းများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းမှ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ပေးရန်၊ လက်သင့်ခံနိုင်သော အပြန်အလှန် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုတန်ဖိုးများအား မြှင့်တင်ပေးရန် Sisi မှ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံကြား အထူးဆက်ဆံရေးနှင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ အချက်အချာကျ၍ မျှတသော အခန်းကဏ္ဍကို မင်းသား ချားလ်စ်က အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးမှုတွင် တက္ကသိုလ်ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး နည်းလမ်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်တော်ဝင် ဇနီးမောင်နှံသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ လေးရက်ကြာ ခရီးစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ နှစ်ရက်ကြာ အလည်အပတ်ခရီးရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
Egyptian president, Prince Charles discuss combating terrorism, regional issues
CAIRO, Nov. 18 (Xinhua) — Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi and Britain’s Prince Charles discussed on Thursday means of combating terrorism and extremist ideology, the presidency said inastatement.
The Egyptian president couple received Prince Charles and his wife Duchess Camilla at the Al-Ittihadiya Palace, according to the statement.
“They discussed several issues of common interests, especially with regard to combating terrorism and extremist ideology,” it added.
Sisi confirmed the keenness to intensify joint cooperation for promoting the values of tolerance, peace, and acceptance of the other inaway that undermines the extremist interpretations of terrorist groups.
He called for adoptingamulti-tiered strategy by the international community that addresses means of confronting extremist ideologies, and promoting the values of tolerance and mutual coexistence.
For his part, Prince Charles stressed the special relations between the two countries and the pivotal and balanced role that Egypt plays in maintaining regional security and stability.
The meeting also tackled ways to enhance bilateral cooperation in the fields of university education and health.
The British royal couple arrived in Egypt foratwo-day visit as part of their four-day tour for the Middle East. Enditem